Shaxda Eldoret: Yaa ku Guulaysan------ Yaa ku khasaari?
Shaki waxa aanu ku jirin in qofkasta oo la socda shaxda lagu ciyaarayo Eldoret uu dhawrayo sida ay ku dhamaan doonto shaxdani. Rajada shirkani waxa ay noqotay mid sida mawjadaha bada marna kor u kaci marna hoos u dhici. Dad badan ayaa saadaaliyay sida uu ku dhamaan doono shirkani. In kasta oo sida ay wax ku dhamaan ay tahay QAYB uu Alle uun ogyahay hadana maqaalkan waxaan ku eegi doonaa natiijada uu ku dhamaan karo shirkan. Sidaas oo kale waxa aan ku eegi cida ku khasaari iyo cidda ku faa’idi shaxdan.
Falsafada uu shirku ka duulayay ayaa waxa ay ahayd in meel la isugu keeno dhamaanba cidkasta oo raadayn siyaasadeed ku leh ama ku lahaan jirtay Soomaaliya. Ha noqdaan Kuwaasi kooxo, dawlad kumeel gaadha, ururo rayida , shakhsiyado amaba dawlad goboleedyo (Cida kaliya ee laga tagay waa Somali/Land sababo aanan halkan ku faalaynayan ayaana looga tagay). Intaas oo dad ah hadii meel la isugu keeno isla markaana culays la saaro, waxaa la filayay in shirkani uu dhalin karo natiijo wax ku ool ah oo xalisa dhibaaatada siyaasadeed ee Soomaaliya. Waxaase jirta oo waaqic ah in inta badan ee dadka meesha isugu yimid aanay ujeedadooda kowaad ahayn in ay xaliyaan dhibtaada Soomaalida. Waxa ay u badanyihiin, aragtidayda, dad raadinaya awood iyo kursi ay ku fadhiistaan. Sida soo if baxaysa maalmahana, hadii ay waayaan kurisgaa waxa cad in aanay dan ka yeelanayn mustaqbalka dadka ay sheeganayaan ama ay doonayaan in ay hogaamiyaan. Waxa ay door bidi in ay arimuhu sida ay yihiin ahaadaan intii mid kale uu u talin lahaa.!!
Waxa kale oo jirta in shirkani aanu ahayn mid aduunyadu ay ihtimaam wayn siinayso waqtigan xaadirka ah. In kasta oo ay dad badani leeyihiin Maraykanka iyo Yurub ayaa shirkan daba taagan hadana taasi ma aha mid ficil ahaan ka muuqata madasha shirkan. Ihtimaamka daciifka ah ee Maraykanku waxa uu ka muuqdaa culayska wafdiga ka jooga shirka. Cida ay u soo dirteen waa ninka ku fadhiya kursiga Soomaaliya ee safaaradooda Kenya. Xitaa umaysan soo dirin shirka safiirkooda Kenya . Yurubna in kasta oo ay kharajka shirka bixnayso hadana awood ay wax ku fuliso kuma laha shirka. Wadamada Carabta iyo Muslimkana iskaba daa hadalkooda. Cidda qudha ee meesha cara cararysaa waa wadamada jiiraanka ah kuwaas oo iyagana mid kastaba uu ujeedo khaasa ka leeyahay shirkan. Hadii cidda ay wadataan soo bixi waydona, wadamadaasi, burburka shirka ayay ka door bidayaan najaaxiisa.
Inkata oo aan jecelahay(sida qofkasta oo samaha jecelba) NAJAAXIDA shirkan, hadana arimahaas aan soo sheegay oo dhami iguma dhiiri galinayaan in aan idhaahdo rajadda shirkani way fiicantahay. Waxaan ka biq nasiibdaro in aan idhaahdo fashilkiisa ayaa ka dhaw najaaxiisa. Xitaa hadii wax la isla garto, hadaanay jirin awood fulisa natiijada shirka guul ma keeni doono. Cid awood wax lagu muquuriya Soomaaliya ula diyaarina iigama muuqato meesha..
Sidii ay noqotaba waxaa muddan in la is waydiiyo cidda ku khasaaraysa iyo cidda ku faa’idaysa fashilka shirkan.?
Yaa ku khasaari?
Waxaa ku khasaari hooyooyinka iyagoo 70 sano jira laga afduubayo aqaladoodii ee u baahan cid difaacda. Waxaa ku khasaari dumarka iyo caruurta ay dagaaladu qaxootiga ka dhigeen ee dawarsanya xerooyinka qaxootiga. Waxaa ku khasaari kuwa maalin kasta iyagoo sii qaxaya ay maydkooda baduhu liqayaan. Waxa ku khasaari kuwa ku barbaaray tacliin la’aanta ee waxa ay ku garaadsaden uu yahay qoriga, dhaca, dilka iyo burburka. Waxa ku khasaari kuwa qaxootiga ku ah qurbaha ee ubadkoodii iyo iyaguba ku dhaqan gadismeen wadamada qalaad. Isku soo duuboo waxaa ku khasaari dadka Soomaaliyeed ee AMALKOODU (rajadoodu) ahaa in mar uun dawlad dhibta ka qaadaa u dhalato.
Yaa ka Faa’idi
Qolooyinkan meesha ku shiraya ee hogaamiyaasha sheeganaya si kasta oo shirku ku dhamaado iyagu ma khasaarayaan. Hadii ay wax isku afgartaan waxa ay isku afgaran wax ay u arkaan in ay ku jirto maslaxadooda. Hadii uu shirku fashilmana mid kastaba xeradii uu ootay buu ku noqon. Shaki la’aan ragaan meesha isugu yimid badidoodu waa dad ka TAAJIRAY dhibta dadkooda hadii ay meelahoodii ku noqdaana dhiigii ummada ee ay jiqi jireen uun bay halkii ka sii jiqi.!
Gabagabdii, Waxaan ka rajaynaa Alle in bishan (Ramadaan) in uu soo dadajiyo xalka dhibta Soomaalida. Kuwa meesha isugu yimidna uuTawfiiqda waafajiyo. Ilaahay uun baa ummadan u maqan ayaan odhan kara.